Kubva 'Halloween Inouraya' kuenda 'Chucky,' Iri Rakanaka Svondo reHorror Fans
musha Horror Varaidzo Nhau Kubva 'Halloween Inouraya' kuenda 'Chucky,' Iri Rakanaka Svondo reHorror Fans
by Waylon Jordan October 12, 2021 4,344 maonero
Zvakaoma kutenda kuti Gumiguru ingangoita hafu yapfuura, asi kunakidzwa kuri kutanga kwevanotyisa vateveri. Tine vhiki yeanotarisirwa epamberi epamberi pedu, uye dambudziko redu guru nderekuziva chekutarisa uye nguva.
Zuva rakatanga rakasimba nekutanga kweiyo nyowani Danidzira tirera! Imwe yeanotarisirwa mafirimu e2022 anoona Sidney, Dewey, naGale vadzoka kuzopa rubatsiro rwavo kuchizvarwa chitsva chevanyajambwa vakatsikwa neGhostface nyowani nekwaniso yekubatana kune vekutanga vevapambi vefranchise. Tarisa uone trailer ne KUCHADZA PANO!
Turera ingori kutanga, zvakadaro. Tarisa izvo zvatiri kutarisira zvakanyanya vhiki ino mune iripazasi, uye tizivise iwo mazita auchange uchiona!
Chucky: Premieres Chipiri, Gumiguru 12 paSyfy uye USA na10 pm ET
Hatigone kumirira kuti tione zvatinofarira muurayi mudhori zviri mune ino nyowani nhevedzano kubva kune franchise musiki Don Mancini!
Premiere Chikamu Chinyorwa: Kana muimbi ane makore gumi nemana ekubhururuka Jake Wheeler (Zackary Arthur) atenga chidhori chemazambiringa cheGood Guy pakutengesa yadhi, achifunga kuchishandisa muchivezwa chake chazvino, hupenyu hwake hwehudiki hunozochinja zvachose - huve nani uye hwakaipa.
Ndinoziva Zvawakaita Zhizha Rakapera: Kutanga paAmazon muna Gumiguru 15
Chidzidzo chekupedzisira munjodzi dzezvakavanzika zvakavigwa, kufungidzira kutsva kwaLois Duncan's 1973 runyorwa rwezita rimwe chete kunounza mafaro, kuuraya, uye kutonhora muna 2021 apo boka revachiri kuyaruka rinozviwana rikabatwa nemhondi asinganzwisisike gore mushure mekunge vafukidza tsaona inotyisa pahusiku hwekupedza kudzidza.
iwe Mwaka 3: Anotanga paNetflix munaGumiguru 15
Mwaka wechitatu wenyaya dzakateedzana nezve njodzi dzinotyisa unorova chikuva chekutepfenyura neChishanu neiyi inotevera zvirevo.
Joe naRudo vakaroora uye vanorera mwanakomana wavo achangozvarwa, Henry, mumusha weCalifornian weMadre Linda. Sezvo hukama hwavo hwehukama hunotora shanduko nyowani, Joe anoenderera mberi achidzokorora kutenderera kwekushushikana pamwe nekufarira kuri kuwedzera kuna Natalie, muvakidzani wepasuo rinotevera. Panguva ino, Rudo achabaya script kuona kuti shuwiro yake yekuve nemhuri yakakwana haizobvamburwa nyore nyore nezviito zvekumanikidza zvaJoe.
Halloween Inouraya: Premieres muTheatre uye paPeacock muna Gumiguru 15!
Ehezve isu tinofanirwa kusanganisira chazvino chitsauko mune iri kuenderera Halloween saga nefirimu nyowani inotora chaipo panosvika 2018's Halloween zvasara!
SYNOPSIS: Dambudziko harina kupera semhondi isingamiswe Michael Meers anopukunyuka kubva mumusungo waLaurie Strode kuti aenderere mberi neropa rake. Vakakuvadzwa uye vakaendeswa kuchipatara, Laurie anorwira kuburikidza nemarwadzo sezvaanokurudzira vagari vemuHaddonfield, Ill., Kuti vamukire Myers. Kutora zvinhu zvavo hands, vakadzi veStrode nevamwe vakapona vanoumba mhomho yekurinda kuti vavhime Michael uye agumise kutonga kwake kwekutyisa kamwechete zvachose.
Slumber Party Kuuraya: Premieres paSyfy muna Gumiguru 17 pa9: 00 pm ET!
Mutambo wekukotsira unotendeuka unouraya apo simba-chibooreso chine muurayi chasarudza kujoina mafaro mune ino remake / reboot yeiyo 1982 firimu inoita kunge iri kukunda pamusoro peanotyisa vateveri kurudyi uye kuruboshwe.